မင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ နဲ့ မင်းရဲ့အောင်မြင်ရေးကို အခက်တွေ့အောင် လုပ်နေတဲ့ အတားအဆီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။မင်းလိုချင်တ
ခု ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အဲဒီအတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တချို့လူတွေက မင်းဟာ မင်းရည်မှန်း ချက်ဖြစ်မြောက် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ဟာ ဖြစ်မြောက်နိုင် စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ တချို့က လည်း ထင်ကြလိမ့် မယ်။ သူတို့ရဲ့ အဆိုးမြင်အတွေးတွေဟာ မင်းရဲ့ မင်းကိုယ်မင်းယုံကြည်မှု (self-confidence) ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းနဲ့ မင်းရဲ့ရည်မှန်း ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင် ရှိတဲ့သူမှန်သမျှ ကို ဝေးဝေးကရှောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အတားအဆီး (၂) အားမပေးတဲ့ လူများ
မင်းလောက် မအောင်မြင်တဲ့သူတွေက မင်းကို ဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်။ မနာ လိုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေလည်း မင်းရဲ့ စိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ ပါတယ်။ မင်းထက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေကည်း မင်းကို ဆရာလုပ်လိ့မ်မယ်။ အထက်စီးကနေဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကည်း မင်းစိတ်ကို အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်စေမှာပါပဲ။အဲဒါတွေဟာ မင်းရဲ့ ရည်မှန်း ချက်အောင်မြင်ရေးမှာ အနှောင့်အယှက်တွေပဲပေါ့။ ဘယ်သူတွေက ဘာပဲပြောပြော မင်းမှာကိုယ်ပိုင် စံသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို အားပေးတဲ့သူတွေနဲ့သာ ပေါင်း သင်းပါ။
Posted by kohtwe at 03:15 No comments:
*ငါအိုသွားသောအခါ ငါဟာ အရင်က ငါမဟုတ်တော့ဘူး ၊
စိတ်ရှည်ရှည် ထားပြီး ဆက်ဆံပေးပါ။
*ချည့်နဲ့ နဲ့လက်တွေနဲ့ထမင်းဟင်းတွေအကျီ င်္ပေါ်ဖိတ်စင်သွားတဲ့ အခါကျီ င်္လုံချည်ဖိုသီဖက်သီဖြစ်နေတဲ့ အခါ ငါ့ကိုမရွံပါနဲ့ ၊
ငယ်ငယ်တုန်းက ငါသုတ်သင်ပေးခဲ့တာတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီး သတိရပေးပါ။
ပြောဖူးတဲ့စကားတွေပြန်ပြောမိတဲ့အခါ စကားမဖြတ်ဘဲကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပေးပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ယာဝင်တိုင်းတစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေ ၊
ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်တွေ ၊ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ တွေကို မရိုးအောင်ပြောရင်း
*မလှုပ်ရှားနိုင်လို့ ရေချိုးဖို့ အကူညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကိုမငြိုငြင်ပါနဲ့ 
ငယ်ငယ်တုန်းက ချော့တစ်လှည့်ခြောက်တစ်လှည့် ရေချိုးပေးဘူးတဲ့
*ခေတ်သစ်နည်းပညာသစ်တွေကို မသိနားမလည်ခဲ့ရင် မလှောင်ပါနဲ့ ။
ငယ်ငယ်တုန်းက " ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ " မေးခွန်းတိုင်းကို စိတ်ရှည်စွာ ငါပြန်ဖြေရှင်းပြခဲ့တာကို
*စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနွမ်းလျပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါ
*တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ ငါ့ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမနည်းပါနဲ့ ၊
နားလည်ပေးပါ ၊ အားပေးပါ။အရင်တုန်းက လူ့ ဘ၀တက်လမ်းအတွက်
ငါလမ်းညွှန်ခဲ့သလို အခုချိန်မှာ ငါ့ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်အတွက်အဖော်ပြုပေးပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အေးမမှုတွေကို ငါပြုံးပြုံးလေးလက်ခံမှာပါ။အဲဒီအပြုံးတွေထဲမှာ မဆုံးနိုင်တဲ့ ငါ့မေတ္တာတွေကို တွေ့ ရမှာပါ။
သားတို့ ၊ သမီး တို့ ရေ...ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေကွယ်...။
Posted by kohtwe at 01:51 No comments:
သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ကူးယူဖော်ပြပါသည်......။
(၂) ကိုယ့်ဖိနပ်စင်မှာ နေရာမလပ်ရှိနေပါလျှက် ထပ်မံ ဖြည့်တင်းလိုက်တဲ့
ဒေါက်ဖိနပ်တစ်ရံရဲ့ တန်ဘိုးဟာ ဆူးစူးနေတဲ့ ခြေထောက်လေးပေါင်းများစွာ အတွက်တော့ အကာအကွယ် တခု ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့...
(၃) ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကိုယ့်အ၀တ်ဗီဒိုထဲကို ပိုပြီး ကျပ်သိပ်သွားအောင်
ဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ် အ၀တ်တစ်ထည်ရဲ့ တန်ဘိုးဟာ
ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အတွက်တော့
(၄) ကိုယ့်မိသားစု အတွက် ဘယ်လိုမှ ကောင်းကျိုး မပေးနိုင်ပဲ ဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တဲ့ ဘီယာဗူးပေါင်းများစွာရဲ့ တန်ဖိုးဟာ မွတ်သိပ်နေတဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ အတွက်တော့ သန့်စင်တဲ့ ရေတစ်ကန် အဖြစ် ကျေးဇူးပြုနိုင်ကောင်းပါရဲ့...
(၅) ကိုယ့်အတွက် လူမြင်ကွင်းမှာ ကြွားဝါဖို့လောက်သာ အသုံးကျတဲ့ iPhone တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အနာဂါတ်မဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အတွက်တော့ ဘ၀အာမခံချက်ကို ပေးနိုင်တဲ့ ပညာရေး တစ်ခု အဖြစ်ဖြည့်ဆည်း
ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်တာလေးတွေကို လောကလိုအပ်ချက်လေးတွေ အဖြစ်
Posted by kohtwe at 06:41 No comments:
အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါပိုးသည် အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်စေသော HIV ရောဂါပိုးထက်အဆ(၁၀၀)ပိုမို
ကူးစက်လွယ်ပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးကူးစက်ပုံနည်းလမ်းများကို အောက်
ကူးစက်မှုနည်းလမ်း ဘီပိုး စီပိုး
မိသားစုအချင်းချင်း တစ်အိမ်တည်းအတူတူနေလျှင် ကူးစက်နိုင်ဖို့များပါသည်။ မကူးစက်နိုင်ပါ။
ရောဂါပိုးရှိသောသူရဲ့ သွေးနဲ့ထိလျှင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ရောဂါပိုးရှိသူ သုံးထားတဲ့ အပ်နဲ့ဆိုလျှင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး အကြောဆေးထိုးပြီးအပ်တွေရောသုံးရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ပိုးရှိတဲ့သွေး သွင်းမိရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့စက်မှာ ပိုးပါသွားရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
နှုတ်ခမ်းချင်ိးထိမိရင် (သို့်)တံတွေးကနေတစ်ဆင့် ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။ ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။
လိင်ဆက်ဆံတာကနေ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။
မိခင်မှ ကလေးသို့ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။
ပိုးပါတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ ခြစ်မိရင်၊ဖောက်မိရင်(ဥပမာ- နားဖောက်တာ၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာ၊သွားနှုတ်တာ၊ရှားခြစ်ခြင်း၊ရှားဆွဲခြင်း) သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
Posted by kohtwe at 08:34 No comments:
( အရှင်ဆန္ဒာဓိက )
Posted by kohtwe at 08:26 No comments:
Posted by kohtwe at 08:19 No comments:
လူ့သဘာဝအရ လူသားဖြစ်သော ကျား(အဖို)နှင့် မ(အမ) တို့ ချိန်ခါရွယ်ရောက်ပြီးနောက် အကြင်လင်မယားအဖြစ် အိုးအိမ်ထူထောင်နေထိုင်လေ့ရှိရာတွင် အမဖြစ်သော သတ္တ၀ါကို ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ခေါ်သော အမည်တမျိုးဖြစ်သည်။
ရှေးအစဉ်အလာအရ ခွဲခြားပြဆိုသောမယားအမျိုးအစားကွဲပြားကို အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
၁။ သူသတ်နှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် ဒေါသ ဖျက်ဆီးအပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ အစီးအပွါးကို အစဉ် စောင့်ရှောက်လေ့ မရှိဘဲ မိမိလင်မှ တခြားသော ယောက်ျား တို့၌ တပ်မက်မောလျက် မိမိလင်ကို (မရိုမသေ) မထီမဲ့မြင် အောက်မေ့၏၊ ဥစ္စာဖြင့် ၀ယ်သူကို သတ်ရန် (အားထုတ်သကဲ့သို့) အားထုတ်တတ်၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို သူသတ်မဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၂။ ခိုးသူနှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် မိမိ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သူ လင်ယောက်ျား သည် အတတ်ပညာကို လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ လယ်လုပ်ခြင်းကို လည်းကောင်း ဆောက်တည် (စီရင်)၍ ရအပ်သော ဥစ္စာအနက် အနည်းငယ်မျှသော ဥစ္စာကို သော်လည်း အပြင်သို့ ဆောင်ယူခြင်းငှါ အလိုရှိ၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို ခိုးသူမ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၃။ အရှင်နှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင် မယားသည် အလုပ်အကိုင် လုပ်ရန် အလိုမရှိ၊ ပျင်းရိ၏၊ အစားကြီး၏၊ စိတ်လည်း ကြမ်းတမ်း၏၊ ကိုယ်အမူအရာလည်း ကြမ်းတမ်း၏၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားတို့ကိုလည်း ဆိုတတ်၏၊ လုံ့လ၀ီရိယ ရှိသော လင်ကို လည်း နှိပ်စက် လွှမ်းမိုး၍ ကျင့်တတ်၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို အရှင်သခင်မဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၄။ အမိနှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် အခါခပ်သိမ်း အစီးအပွါးကို အစဉ်စောင့် ရှောက်လေ့ရှိ၏၊ အမိသည် သားကို အစဉ်စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ လင်ကို အစဉ် စောင့်ရှောက်တတ်၏၊ ထို့ကြောင့် ထိုလင် ယောက်ျား ဆည်းပူးရှာဖွေအပ်သော ဥစ္စာကို စောင့်ရှောက်၏၊ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို အမိဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၅။ နှမနှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် အစ်မကြီး နှမငယ်သည် မောင်၌ ရိုသေ သကဲ့သို့ ထို့အတူ မိမိလင်၌ ရိုသေ၏၊ အရှက်နှင့်ယှဉ်သော စိတ်ရှိ၏၊ လင်၏ အလိုသို့ လိုက်တတ်၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို အစ်မ နှမဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၆။ အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော မယား၊
လင် ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် ဤလောက၌ အဆွေခင်ပွန်းသည် ကြာမြင့် မှ ရောက်လာသော အဆွေခင်ပွန်းကို မြင်၍ လွန်စွာ ၀မ်းမြောက် သကဲ့သို့ လင်ကို မြင်၍ လွန်စွာ ၀မ်းမြောက်၏၊ အမျိုးနှင့် ပြည့်စုံ၏၊ သီလရှိ၏၊ လင်၌ ရိုသေစွာ ကျင့်တတ်၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို အဆွေခင်ပွန်းဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
၇။ ကျွန်မနှင့်တူသော မယား၊
လင်ယောက်ျား၏ အကြင်မယားသည် (လင်ယောက်ျားက) တုတ်လှံတန်ကို ကိုင်၍ သတ်ပုတ် ခြင်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက် အပ်သော်လည်း အမျက်ထွက်ခြင်း ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိ၊ (ဒေါသဖြင့်) မပြစ်မှားသော စိတ်ရှိ၏၊ လင်ကို သည်းခံတတ်၏၊ အမျက်ထွက်ခြင်း မရှိ၊ လင်၏ အလိုသို့ လိုက်တတ်၏၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ထိုမယားကို ကျွန်မဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မယားဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုအပ်၏။
ဘရိယာသုတ်၊ အဗျာကတ၀ဂ်၊ အင်္ဂုတ္ထိုရ်။
Posted by kohtwe at 07:35 No comments:
တစ်ခါက အက်ဒီဆင်မှာ အားအကိုးရဆုံး တပည့်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်.။ သူဟာ အက်ဒီဆင်ရဲ့ အားအကိုးရဆုံးသော တပည့်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်. ။ တွေးခေါ်စဉ်းစား လုပ်ကိုင်မှု အားအလွန် ထက်သန်ကောင်းမွန်တယ်.။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ပြည့်ဝတယ်.။ အက်ဒီဆင်ပြီးရင် သူ့ကို အားလုံးက အလေးစားဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်.။ ဒါကို သူက ဒီလို ပြောတယ်.။ “ တကယ်တော့ဗျာ.။ ကျွန်တော် က ဘာမှ တတ်တဲ့ သိတဲ့ တော်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်ဟာ သာမာန်လူတစ်ယောက်ပါ.။ ဒါပေမဲ့
အရမ်းကို တတ်ကြွ ဖြတ်လတ် နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့ တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်မှာ အင်အားတွေ အလိုလို ရှိလာတယ်.။ အတွေးတွေ ထက်မြက်လာတယ်.။ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပျက်နေမိတဲ့ နေ့ရက်တွေ ၊ အင်အားမဲ့နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆရာရဲ့ အမြဲတမ်း သွက်လက်နေမှုက ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းသွက်သက် ထက်မြက်လာအောင် ဆွဲဆောင် လှုပ်ဆော်သွားတာပါပဲ.။ ”
Posted by kohtwe at 07:28 No comments:
Posted by kohtwe at 06:17 No comments:
ယနေ့ခေတ်တွင် လူသားတို့သည် မိမိဘ၀ရပ်တည်မှု၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ
ယှဉ်ပြိုင်လာကြရာ ရှေးက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုချင်းယှဉ်ပြိုင်လာကြရာမှ
ထိုသို့ယှဉ်ပြိုင်ကြရာမှ အသိပညာရှင် IQသမားများသည် လွန်စွာအားထား ရသော ဖွံ့ဖြိုးရေးပြယုဂ်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
၄င်းတို့သည်မွေးရာပါဥာဏ်ထူးသူgeniusများသာမက သင်ကြားပေါက်မြောက် အောင်မြင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးပြုသူ
မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပဲ့ကိုင်နိုင်စွမ်းသောEQ သမားသည် ထိုထက်ပိုအရေးပါလာပေသည်။ဥပမာ-ဟစ်တလာသည် ထူးချွန်
သဖြင့် ကျဆုံးရလေသည်။မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းသော EQသမားသည် ပိုပြီးအောင်မြင်ရတတ်ပေသည်။
၄င်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းပါဝင်ပေသည်။
ထိုနောက်တွင်မှ SQ ကို ဖြည့်စွက်လာကြသည်
ှSQသည် Will Powerနှင့် စပ်ဆိုင်ပေသည်။ ပြသနာတစ်ရပ်ကို ကြားသည်နှင့်
အဖြေထုတ်နိုင်စွမ်း၊ အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်သည်။ ဥပမာ-မိုးလေ၀သပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ကဲ့သို့..တိမ်ကိုမြင်သည်နှင့် မိုးရွာမည်
မရွာမည် ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းသော သူမျိုး။ IQ,EQ နှစ်ရပ်လုံးပြည့်စုံပါမှ sQသည် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာရသ်ည်။လျင်မြန်စွာ စဉ်းစားအဖြေထုတ်နိုင်ခြင်း၊ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ရဲရင့်စွာသုံးသပ်နိုင်ခြင်း၊တွေး
ခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ခြင်း၊ဥပဒေဘောင်တွင်းမှ ဆီလျော်မည့် စည်းကမ်းမူဝါဒများ၊
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းသူများကို ဆိုလိုသည်။မည်သည့်မူဝါဒကိုမျှပုံသေကားချပ်မထားတတ်သူမျိုးဖြစ်သည်။
Karsino (https://www.facebook.com/karsi.no.7) ၏ ရေးသားချက်ကို ကူးယူဖေါ်ပြသည် ။
Posted by kohtwe at 09:39 No comments: